Mudaaharaadyada oo maalintii labaad ka sii socda Itoobiya
Awaday 08/03/2019 Kumannaan ruux ayaa maalintii labaad mudaaharaadyo ka wada gobolka Oromada ee dalka Itoobiya. Mudaaharaadayaasha sawirka ka muuqda ayaa isugu soo baxay magaalada Awaday iyaga oo ku dhawaaqaya Addis Ababa Oromaa leh. Mudaaharaadyada ayaa salka ku haya go’aanka uu maamulka Addis Ababa ku iibinayo guryo cusub. Dadka mudaaharaadaya ayaa sheegaya in dawladdu aysan magdhaw
Madaxweyne Biixi oo maanta daahfurey barnaamijka Carbiska dhallinyaradda ee shaqo Qaran
Hargeysa (SRTVLIVE) 03/03/2019 Madaxweyne Muuse Biixi ayaa maanta daahfurey barnaamijka carbiska dhallinta ee shaqo qaran oo kamid ah tiirarkii halbawlaha u ahaa ballanqaadyadii xisbiga KULMIYE bulshada la galay waqtiyadii ololaha. Munaasibadda Daah-furka barnaamijka shaqo qaran oo lagu qabtay deegaanka Darar-weyne oo hangarro waaweyn oo qalabaysan looga dhisay dhallinyarada barnaamijkan ku guulaysatay, ayaa waxa ka qaybgalay
Kulan saddex geesood ah oo Asmara uga socda Madaxda Kenya Itoobiya iyo Eritrea
Asmara (SRTVLIVE) 03/03/2019 Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata iyo Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta gaaray magaalada Asmara ee dalka Etirea. Waxaa halkaasi ku soo dhoweeyay Madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki iyo xubno ka tirsan dowladiisa. Saddexda hoggaamiye ee isugu tegay magaalada Asmara ayaan faafhaahin badan laga bixin qorshahooda, balse Wasiirka Warfaafinta Eritrea Yemane Gebre
Puntland: 2,000 oo soogalooti Itoobiyan ah oo dalkoodii lagu celiyay
Garoowe (SRTVLIVE) 03/03/2019 Puntland ayaa toddobaadyadii u dambeeyay dib ugu celisay dalkoodii illaa 2,000 oo soo galooti Itoobiyan ah,sida laga soo xigtay guddiga qaxootiga Itoobiya ee ku sugan Puntland. Dadkan ayaa inta badan laga aruuriyay xaafadaha magaalada Boosaaso oo ay ku badanyihiin soo galootiga Itoobiyanka ah, halka qaar kalana la qabtay xilli ay doonayeen inay
Ra’iisal wasaare Kheyre oo u anbabaxay dalka Switzerland
Switzerland (SRTVLIVE) 03/03/2019 Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maant u ambabaxay magaalada Geneva ee dalka Switzerland, halkaasoo uga qeyb galayo shir hal maalin dhacaya. Ra’iisul Wasaaraha ayaa magaalada Geneva uga qeyb galaya shirar looga hadlayo Xuquuqul Insaanka iyo shaqo la’aanta Dhalinyarada, isagoo khudbad ka jeedin doono.Socdaalka ra’iisal wasaaraha uu maanta ugu anbabaxay dalka
Jordan (SRTVIVE) 03/03/2019 Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay ku suganyihiin dalka Jordan ayaa ka qeyb galay kulan ay yeesheen Guddoomiyaasha Midowga baarlamaanada Carabta kaa soo hor u dhac u ah shirka 29-aad ee midowga Baarlamaanada carabta oo ka furmi caasimada Cammaan oo ah magaalada madaxda
Madaxweyne Farmaajo oo Booqasho Shaqo ugu Ambabaxay Dalka Qatar
Muqdisho (srtvlive) 26/02/2019 Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhaw u ambabaxay magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaas oo ay uga bilaabanayso booqasho shaqo oo labo maalmood ah Madaxweynaha oo martiqaad ka helay Amiirka Dowladda Qatar Sheekh Tamiim Bin Xamad Al Thaani ayaa kala hadli doona xoojinta xiriirka labada
Gaalkacyo: Afar qof oo loo xiray dilka gabar 12 jir ah
Gaalkacyo (srtvlive) 26/02/2019 Puntland ayaa shaacisay goor dhow in afar qof loo xiray fal foolxun oo lagu la kacay gabadh yar oo lagu kufsaday magaalada Galkacyo, kadibna la dilay. Guddoomiyaha gobolka Mudug, Cabdulqaadir Xuseen Nuur Dirir oo dadka loo soo xiray dilkan ka hadlay ayaa sheegay in cadaaladda la marin doono, waliba meel fagaare ah.“Haddii
Muqdisho (SRTVLIVE) 13/02/2019 Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgal ballaaran ka sameeyay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu danbeeyayba ku soo badanayeen falalka ka dhanka amniga gaar ahaan dilalka qorsheysan. Howlgal xalay ciidamadu ay ka sameeyeen degmada Warta Nabada ayeey ku soo qabqabteen boqolaal dhalinyarro ah oo leysugu geeyay goob
Isku-shaandheyn lagu sameeyay Golaha Wasiirradda Hirshabeelle
Hirshabeelle (SRTVLIVE) 07/02/2019 Madaxweynaha maamul gobolleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa mar kale isku –shaandheyn ku sameeyay xubnaha golihiisa Wasiirradda, iyadoo maalmihii ugu danbeeyay uu wajahayay madaxweynaha culus uga imanayay xildhibaannada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Isku-shaadheyntan ayaa saameysay Wasirradda, Wasiirru-dowlayaasha iyo Wasiir ku-xigeennada oo intooda badan ah xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle, waxaana muuqata in is
Madaxweyne Biixi oo xafiiskiisa ku qaabilay wefti ka socda koonfur Afrika iyo shirkii golaha wasiirada oo warbixin laga soo saaray
Hargeysa (SRTVLIVE) 07/02/2019 Shirkii golaha Wasiiradda Somaliland ayaa maanta warbixin lagaga dhegaystay Qaar Kamida Wasaaraddaha. Shirkan golaha wasiirada waxa shirgudoominayey madaxweyne Muuse Biixi, waxaana ku wehelinayey madaxweyne ku xigeenka Saylici, waxaana warbiximo lagaga dhegeystay wasaaradaha Qorsheynta iyo horumarinta Qaranka Iyo Xannaanada Xoolaha & horumarinta Kalluumaysiga oo qorshe hawleedkooda ku soo bandhigay golaha. Ugu horrayn waxa
Muqdisho (SRTVLIVE) 07/02/2019 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ka qayb galay xiritaanka Shir Sanadeedka Garsoorka Soomaaliya oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha oo munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa sheegay in Dowladda Federaalku ay qaadday tallaabooyin muhiim u ah dhismaha garsoor hufan, madaxbannaan isla markaana lagu kalsoon yahay, welina ay
Dowladda Soomaaliya oo soo dhameystiraysa adeegyada Boostada ee dalka
Muqdisho (SRTVLIVE) 02/02/2019 Wasiirka Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta xukuumadda Soomaalya Eng. Cabdi Canshuur Xasan ayaa sheegay in sanadkaan bilaawga ah ee 2019’ka ay soo dhameysiri doonan dhamaan adeegyada Boostada ee dalka. Wasiir ayaa sheegay in deymo badan oo dhanka Boostada ah lagau leeyahay dowladda Soomaaliya ugu horeyna ay ku dedaali doonaan sidii deymahaasi ay u
Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlay iskaashiga dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab
Kenya (SRTVLIVE) 30/01/2019 NAIROBI (SRTVLIVE) 30/01/2019 Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo safar ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa kulan uu la qaatay madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaa ay ka wada hadleen sidii labada dalka Soomaaliya iyo Kenya isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab. Ra’iisul wasaaraha oo madaxwayne Kenyatta u muujiyay sida ay
Mareykanka (SRTVLIVE) 26/01/2019 Madaxweynaha dalka Marekanka ,Donald Trump ayaa saxiixay heshiis oggaalanaya in dib loo furo shaqadii dowladda Marekanka oo muddo hakad ku jirtay. Heshiiskan oo uu saxiixay Trump , habeenimadii xalay waa mid kumeel-gaar ah kaa oo oggaalanaya in muddo saddex toddobaad ah dib loo furo howlihii shaqo ee dowladda,waxaana tallaabadan ay fursad u